လယ်ယာမြေကို ဝယ်၍ နေထိုင်ကြမည်ဆိုလျှင်
Currency Any သိန်း MMK $
09-894 0990 11 to 09-894 0990 77
110 ပြည်လမ်း (8မိုင်လမ်းဆုံ) ဒုတိယထပ် (အခန်း 17) မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
Yangon Property Guides
မြေညီထပ် နှင့် ဆိုင်ခန်းများ
ဟိုတယ် / တည်းခိုခန်း
ဗမာစာ English 简体中文 繁體中文 日本語 한국어 Français Deutsch Nederlands ไทย Tiếng Việt Español Italiano Русский العربية Harshen Hausa Беларуская мова বাংলা Български हिन्दी Basa Jawa ພາສາລາວ Bahasa Melayu Português ਪੰਜਾਬੀ தமிழ்
ဩဂုတ် 24, 2019
Category: ဝယ်ချင်သူ, ဥပဒေ
“အကွက်ရိုက်ထားတဲ့ လယ်ယာမြေကို ဝယ်ရင် တရားဝင် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရပါသလား”
မိတ်ဆွေတစ်ဦးက စာရေးသူထံ လာရောက် ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်သည်။
“အရောင်းအဝယ်ကတော့ လုပ်နေကြတာပဲ။ အချို့ငွေကြေးရှိသူ တွေက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားကြတာတွေလည်းရှိတယ်။ သွားကြည့်ရင် လယ် ကွင်းပြင်မြေကွက်အဖြစ်ပဲ တွေ့ကြရတယ်။ အချို့မြေကွက်တွေဆိုရင် ရေတွေဝပ်နေတာတွေလည်း ရှိတယ်”
“အခု မြေကွက်တွေကတော့ ခြံစည်းရိုး ကာထားတာတွေ့ရတယ်”
“နောက်ပိုင်း လူနေထိုင်ခွင့်အတွက် လျှောက်ထားရင်ရတယ်လို့ပြောတယ်။ လူနေရပ်ကွက်ဖြစ်လာ ရင်တော့ အဆင်ပြေမလားလို့”
“လူနေထိုင်ခွင့်ရဖို့အတွက် အဆင့်ဆင့်ရှိတယ်။ အချိန်တော့ စောင့်ရမယ်”
“အဲဒီ အဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်ပုံကို နားလည်ထားချင်လို့ သူငယ်ချင်းဆီ ရောက်လာတာ”
“လယ်ယာမြေ ဥပဒေက ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်မှာ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တယ်။ လယ်ယာမြေဆိုတာ လယ်မြေ၊ ယာမြေ၊ ကိုင်း ကျွန်းမြေ၊ ဥယျာဉ်ခြံမြေ၊ မြေနုကျွန်း မြေများပါဝင်တယ်လို့ ဥပဒေမှာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတယ်။ အဲဒီမှာ လယ်မြေဆိုတာက စိုက်ပျိုးရေးယူပြီး စပါးသီးနှံ အဓိက စိုက်ပျိုးမြေလို့ သီခြားအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတယ်”
“လယ်ယာမြေဥပဒေအရ လွှဲပြောင်းရောင်းချခွင့်ရှိတယ် မဟုတ်လား”
“လယ်ယာမြေ ဥပဒေပုဒ်မ-၉မှာ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ရသူသည် လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို လယ်ယာမြေအားလုံးကိုဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေ၊ လွှဲပြောင်းရောင်းချ၊ ပေါင်နှံ၊ ငှားရမ်းခွင့်ရှိတယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်။ အဓိကအချက် ကတော့ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို လွှဲပြောင်းရောင်းချတာပဲဖြစ်တယ်”
“လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို လွှဲပြောင်း၊ ရောင်းချတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လို စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားကို ရယူဖို့လိုပါသလဲ”
“သက်ဆိုင်ရာက လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် လက်မှတ် ပုံစံ (၇) ကို ထုတ်ပေးထားတယ်။ ပုစံ (၇) လယ် ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် လက်မှတ်နဲ့အတူ တွဲပြီး မြေစာရင်းပုံစံ (၁ဝ၅) လို့ ခေါ် တဲ့ မြေပုံမြေရာဇဝင် စာရွက်လည်း ပါရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်”
“ဒါဆိုရင် လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် လက်မှတ်ပုံစံ (၇) နဲ့ မြေကွက် မြေပုံပါရှိတဲ့ ပုံစံ (၁ဝ၅) ရှိမရှိ စုံစမ်း ရမှာပေါ့”
“မှန်ပါတယ်။ မြေစာရင်းပုံစံ (၁ဝ၅) မှာလည်း နှစ်မျိုးထုတ်ပေးထားတာရှိတယ်။ အဖြူရောင် စာရွက်ပေါ်မှာ မြေပုံဆွဲထားတဲ့ စာရွက်စာတမ်းနဲ့ အပြာရောင်စာရွက်ဆိုဒ် အရှည်နဲ့ ထုတ်ပေးထားတဲ့ စာရွက်စာတမ်းဖြစ်တယ်။ ပုံစံ ၁ဝ၅ အပြာ ရောင်မြေပုံ စာရွက်စာတမ်းကတော့ ဘဏ်ချေးငွေ ထုတ်ယူရန်အတွက် လျှောက်ထားရယူထားတဲ့ စာရွက် စာတမ်းဖြစ်တယ်”
“ပုံစံ (၇) နဲ့ ပုံစံ ၁ဝ၅ ရှိရင် တရားဝင် လွှဲပြောင်းရောင်းချနိုင်ပြီ ပေါ့”
“လယ်ယာမြေ ဥပဒေအရတော့ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ရာရှိသူသည် လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို လွှဲပြောင်းရောင်းချမယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနရုံးမှာ မှတ်ပုံတင် စာချုပ်စာတမ်းချုပ်ဆိုဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်”
“ဒါဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ မြေ စာရင်းဦးစီးဌာနမှာ စုံစမ်းရယူနိုင်တယ်ပေါ့”
“ဟုတ်ပါတယ်။ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပုံစံ (၇) ထုတ်ပေးထားခြင်းရှိမရှိ၊ ပုံစံ ၁ဝ၅ မြေပုံမြေရာဇဝင်ပါမပါတို့ကို စိစစ်ကြည့်ရှုပြီးမှ ဝယ်သင့်ပါတယ်”
“အချို့က ပြောတော့ လယ်ယာ မြေတွေကို လူနေခွင့်ရဖို့ လျှောက်ထားရယူနိုင်တယ်လို့ ပြောတယ်။ အဲဒါက ဘာဆိုလိုတာလဲ”
“အစောက ပြောသလို လယ်ယာမြေကို လွှဲပြောင်းရောင်းချတယ်ဆိုတာ လယ်ယာမြေပေါ်မှာ စိုက်ပျိုး လုပ်ကိုင်ခွင့်၊ လွှဲပြောင်းရောင်းချတာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီ လယ်ယာမြေပေါ်မှာ လူနေထိုင်ခွင့်မရသေးဘူး။ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ခွင့်သာရရှိတာ ဖြစ်တယ်”
“ဒါဆိုလူနေရပ်ကွက်ဖြစ်ဖို့ ခက် ခဲမှာပေါ့”
“အချို့ကလည်း ရောင်းချလွှဲပြောင်းတဲ့ လယ်ယာမြေတွေဟာ လူနေရပ်ကွက်နဲ့ နီးစပ်တဲ့ နေရာဖြစ်ရင်တော့ အနှေးနဲ့အမြန် လူနေရပ်ကွက် ဖြစ်လာမှာပဲဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ ဝယ်ကြတာရှိတယ်”
“လူနေရပ်ကွက်ဖြစ်ဖို့ ဘယ်လို ဆောင်ရွက်ရပါသလဲ”
“စပါးသီးနှံကိုသာ စိုက်ပျိုးတဲ့ ‘လယ်မြေ’ဆိုရင်တော့ လယ်ယာမြေ ဥပဒေပုဒ်မ ၃ဝ (က) အရ၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လယ် ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ရဲ့ စိစစ် ထောက်ခံချက်နဲ့ ဗဟိုလယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ထံ တင်ပြခွင့်ပြုချက် ရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို လျှောက်ထားချက်ပုံစံကို ပုံစံ ၃ဝ (က) လို့ အလွယ်တကူ ပြောနေကြတာ ဖြစ်တယ်”
“ပုစံ ၃ဝ(ခ) ဆိုတာလည်းပြောတယ်။ အဲဒါက ဘယ်လို အမျိုးအစားလဲ”
“ပုံစံ ၃ဝ(ခ) ဆိုတာက စပါးသီးနှံ တစ်မျိုးကိုသာ စိုက်ပျိုးတဲ့ လယ်မြေ မဟုတ်ဘဲ ကျန်လယ်ယာမြေတွေကို အခြားနည်း အသုံးပြုဖို့ လျှောက်ထားရာမှာ ပုံစံ ၃ဝ (ခ) အရ လျှောက်ထားရတယ်။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ရဲ့ စိစစ်ထောက်ခံချက်နဲ့ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ထံ တင်ပြခွင့်ပြုချက်ရယူရမှာဖြစ်တယ်”
“သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းက ထုတ်ပေးတဲ့ အခြားနည်း အသုံးပြုခွင့် လက်မှတ်ကို ပုံစံဘယ်လောက်လို့ ခေါ်ပါသလဲ”
“ပုံစံ ၃ဝ (က) အရ စပါးသီးနှံ စိုက်ပျိုးတဲ့ လယ်မြေပေါ်မှာ အခြားနည်းအသုံးပြုခွင့် လက်မှတ်ကို ပုံစံ ၁၅ (က)လို့ ခေါ်ကြပြီး ကျန်လယ် မြေပေါ်မှာ အခြားနည်း အသုံးပြုခွင့် လက်မှတ်ကို ပုံစံ ၁၅ (ခ) လို့ ခေါ်ကြ တယ်”
“အဲဒီ ပုံစံ ၁၅(က)၊ ပုံစံ ၁၅(ခ) ဖြစ်တဲ့ အခြားနည်းအသုံးပြုခွင့် လက်မှတ်ရရင် လယ်မြေပေါ်မှာ အိမ်ဆောက်နေထိုင်နိုင်ပြီပေါ့”
“မှန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လယ်ယာမြေကို ဝယ်တဲ့အခါ သေချာစိစစ် ဝယ်ယူဖို့လိုပါတယ်”
“အကွက်ရိုက်ခြံစည်းရိုးခတ်ထားရုံနဲ့ လယ်ယာမြေခွဲစိတ်ထားပြီးလို့ ယူဆမရဘူးပေါ့”
“ဟုတ်ပါတယ်။ ဝယ်ရောင်း အကျိုးဆောင်ပွဲစားများနဲ့ ဆောင်ရွက်တဲ့အခါ လယ်ယာမြေပုံစံ (၇)နဲ့ အတူပုံစံ (၁ဝ၅) မြေပုံမြေရာဇဝင်ပါ ရှိခြင်းရှိမရှိ စိစစ်ဝယ်ယူသင့်တယ် သူငယ်ချင်း”ဟု အကြံပြုဆွေးနွေး လိုက်ပါသည်။
Credit to: ‌ဈေးကွက်ဂျာနယ်
previousအိမ်မြေရောင်းသည့် အမွေထိန်းစာရသူ ကွယ်လွန်သွားပါက အရောင်းအဝယ်ပျက်ပြယ်ပါသလား
nextအမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ထားသည့် သားသမီးနှင့် ဆက်စပ်နေသော မြေနှင့်အိမ်ကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
ဇန်နဝါရီ 31, 2021
နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် အလုပ်သွားလုပ်နေသူက အိမ်မြေဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“ဒဂုံမြို့သစ်ဘက်မှာ မြေတစ်ကွက်ဝယ်ချင်လို့ဆရာ၊ ကျွန်တော့် အမည်ပေါက်ဆိုရင်ဘယ်လို ဆောင်ရွက် ရမလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါ။ ကျွန်တော် ကလည်းချက်ချင်း ပြန်မလာနိုင်သေးဘူး။ “မောင်ရင့်အမည်နဲ့ မြေကွက် အမည်ပေါက်ချင်တာလား” “ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုး အရောင်းအဝယ် စာချုပ်ပြုလုပ်မှ မြေကွက်အမည် ပေါက်ရမယ်လို့ သိထားပါတယ် ဆရာ။ အဲဒါ ဟုတ်ပါသလား”
ဇန်နဝါရီ 23, 2021
မြေလွတ် မြေလပ် မြေရိုင်းကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
လွယ်လွယ်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ပန်းမန်စိုက်ပျိုးတဲ့ ဥယျာဉ်ခြံမြေအမျိုး အစားဖြစ်တာကြောင့် လူနေရပ်ကွက်နဲ့ ဆက်စပ်နေတာမျိုးရှိတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် လယ်ယာမြေကို အ ခြားနည်းနဲ့ အသုံးပြုခွင့်လျှောက်ထားပြီး လူနေရပ်ကွက်၊ လူနေအဆောက် အအုံဆောက်လုပ်နေတာမျိုးတွေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ပြီးတော့ လွှဲပြောင်း ရောင်းချခွင့်ရှိတယ်။
နိုင်ငံတော်အစိုးရက သိမ်းပြီး ပြန်ပေးသည့် မြေကွက်ကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
“သူတို့ ပြောတာကတော့ ကျူးကျော်နေကြသလို ပြောတာပဲ ဆရာ။ တချို့ကလည်း အဲဒီဝန်ကြီးဌာနလား၊ အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနကိုလား မြေငှားခ သဘောပေးရတယ်လို့လည်း ပြောကြတယ်။ သေချာ မသိဘူး” “အဆောက်အအုံတွေရှိတဲ့ မြေ ကို ရောင်းမယ့် သဘောပေါ့” “ဟုတ်ပါတယ် ဆရာ။ ဒါကြောင့် သူတို့ကိုလည်း ဘယ်လိုနှင်ရမယ်ဆိုတာလည်း သိချင်လို့ပါ”
လယ်ယာမြေကို ဝယ်ပြီး အကွက်ရိုက်ပြုပြင် ရောင်းချမည်ဆိုလျှင်
တရားရုံးက ပြေငြိမ်းဒီကရီ ချမှတ်ထားသည့် အိမ်မြေကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင်
YgnHome.com (Myanmar Property Portal Pte Ltd) isafastest growing real estate company in Yangon (Myanmar) and organized with young and energetic staffs serving 100% free for all buyers and lessees for all type of properties in Yangon. YgnHome.com provides comprehensive & professional services including arranging tour trip to interested properties, dealing with owners, price negotiating and even helping legal contract at free of charge. PS: Owners pay us.
110 Pyay Road (8 Mile Junction) #02-17 Mayangone Township, Yangon, Myanmar.
Copyright © 2019 - 2022 YgnHome.com. All rights reserved.